ဝိုင် စင်တောရိ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးသည် Y Centauri အကြောင်း ဖြစ်သည်။ y Centauri အတွက် HD 120987 ကို ကြည့်ပါ။ Γ Centauri အတွက် ဂါမာ စင်တောရိ ကို ကြည့်ပါ။
14° 30′ 58.61656″
ဗဟိုခွာအား အလျင် (Rv) −6.00 km/s
သင့်လျော် ရွေ့လျားမှု (μ) RA: −39.66 mas/yr
ပြောင်းလဲ တည်နေရာ (π) 3.50 ± 0.93 mas
အကွာအဝေး approx. ၉၀၀ ly
(approx. ၂၉၀ pc)
တောက်ပမှု 5,317 L☉
သက်ရောက်သည့် အပူချိန် 2,907 K
ဝိုင် စင်တောရိ သို့မဟုတ် Y Cen (HD 127233, HIP 70969) သည် စင်တောရပ် ကြယ်စုတန်းမှ ပြောင်းလဲတတ်သောကြယ် ဖြစ်သည်။ ကြယ်၌ ပြောင်းလဲတတ်မှုကို ၁၈၉၅ ခုနှစ်တွင် ဝီလီယမ်မီနာ ဖလင်းမင်းဆိုသူက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး Third Catalogue of Variable Stars တွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကြယ်၏ အကွာအဝေးကို သိရသည်မှာ မရေရာလှပေ။ သို့သော် လေ့လာမှုအရ အလင်းနှစ် ၉၀၀ သို့မဟုတ် ၅၈၅ ဟုခန့်မှန်းထားသည်။ ကြယ်သည် နေထက် အဆပေါင်း ၅ ထောင် ပိုမိုတောက်ပသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ "Validation of the new Hipparcos reduction" (2007). Astronomy and Astrophysics 474 (2): 653. doi:10.1051/0004-6361:20078357. Bibcode: 2007A&A...474..653V.
↑ ၃.၀ ၃.၁ "VizieR Online Data Catalog: General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2007-2013)" (2009). VizieR On-line Data Catalog: B/gcvs. Originally published in: 2009yCat....102025S 1: 02025. Bibcode: 2009yCat....102025S.
↑ "Pulkovo Compilation of Radial Velocities for 35 495 Hipparcos stars inacommon system" (2006). Astronomy Letters 32 (11): 759. doi:10.1134/S1063773706110065. Bibcode: 2006AstL...32..759G.
↑ ၅.၀ ၅.၁ "Fundamental parameters and infrared excesses of Hipparcos stars" (2012). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 427: 343. doi:10.1111/j.1365-2966.2012.21873.x. Bibcode: 2012MNRAS.427..343M.
↑ "How many Hipparcos Variability-Induced Movers are genuine binaries?" (2003). Astronomy and Astrophysics 399 (3): 1167. doi:10.1051/0004-6361:20021843. Bibcode: 2003A&A...399.1167P.
↑ "SiO and H2O Maser Survey toward Post-asymptotic Giant Branch and Asymptotic Giant Branch Stars" (2014). The Astrophysical Journal Supplement 211: 15. doi:10.1088/0067-0049/211/1/15. Bibcode: 2014ApJS..211...15Y.
ဤ ပြောင်းလဲတတ်သောကြယ်–နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆောင်းပါးမှာ ဆောင်းပါးတို တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်းဖြင့် မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားကို ကူညီပါ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝိုင်_စင်တောရိ&oldid=369787" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဇွန် ၂၀၁၇၊ ၁၂:၄၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။